कालिका पावरको नाफासँगै विद्युत् बिक्री आम्दानी पनि बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? - Arthasansar
कालिका पावरको नाफासँगै विद्युत् बिक्री आम्दानी पनि बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
शुक्रबार, ३१ बैशाख २०७८, १० : २० मा प्रकाशित
कालिका पावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीको नाफा ३४.२७ प्रतिशतले ६ करोड २१ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिमा वर्ष कम्पनीले ४ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँमात्रै खुद नाफा कमाएको थियो ।
चैत मसान्तसम्म कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट १४ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ यस्तो आम्दानी गते वर्षको तुलनामा ४.६७ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्ष कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट १३ करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
गत वर्ष २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी यो वर्ष १ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
हाल चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १२ करोड ४८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक १३ रुपैयाँ ८० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ८१ पैसा छ ।